Xulka cayaaraha | Radio Himilo | Page 4
Home / Xulka cayaaraha (page 4)
Chelsea iyo Brighton Albion oo foodda isku dari doona Stamford Bridge.
radio himilo December 26, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 62 Views
Muqdisho – Kooxda horyaalka difaacaneysa ee Chelsea ayaa soo dhwen doonta kooxda Brighton ciyaar ka dhici doonta Stamford Bridge. Blues waxa ay 3 dhibcood ka hooseysaa naadiga ku jirta kaalinta labaad ee horyalka waxeyna leedahay 39 dhibcood isla markaasna waxey ...
Liverpool oo Swansea City ku marti galineysa garoonka Anfield.
radio himilo December 26, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 51 Views
Muqdisho – Liverpool oo kaga jirtaa horyaalka kaalinta 19 iyadoo leh 35 dhibcood isla markaana kor u fiirineysa kooxda United, City iyo Chelsea ayaa soo dhaweyn doonta kooxda Swans ciyaar ka dhici doonta garoonka Anfield ee magaalada Liverpool. Liverpool waxaa ...
radio himilo December 26, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 57 Views
Muqdisho – Kadib markii Sabtigii ay barbaro 2-2 ah la gashay Leicester City, the Reds ayaa indha ku heysa in ay kusoo laabato waddada guulaha marka ay u safraan Burnley kulan ka tirsan Boxing Day. Manchester City ayaa hadda horyaalka ...
Neville: “City ma ahan koox weyn.”
radio himilo December 24, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 58 Views
Muqdisho – Manchester City lalama simi karo Manchester United iyo Chelsea markii ay ku jireen gacanta Sir Alex Ferguson iyo Jose Mourinho, sida uu yiri Gary Naville. Pep Guardiola ayaa dhigay rikoor cusub oo ah inuu 14 dhibcood oo nadiif ...
Saleh oo doonaya ku biirista Real Madrid.
radio himilo December 24, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 55 Views
Muqdisho – Mohamed Saleh ayaa ku dhow inuu isaga tago kooxda LIverpool una dhaqaaqo Real Madrid, wuxuuna diyaar u yahay inuu tallaab horay ugu qaado, sida ay sheeganeyso don balon. Xiddiga xulka qaranka Masar ayaa ban-dhig qurux badan ka sameeyey ...
Benzema oo loo sheegay inuu ka tegi karo gegida Barnabeu.
radio himilo December 24, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 34 Views
Muqdisho – Real Madrid hadda waxaa ka go’an inay iska iibiso laacibka reer Faransa ee Karim Benzema kaas oo la siiyay xilli kama danbeys ah kulankii El Classico ee shalay ka dhacay Spain, marka loo eego don balon. Wararka ayaa ...
Barcelona oo qarka u saaran soo xera galinta Philippe Coutinho.
radio himilo December 21, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 43 Views
Muqdisho – Barcelona ayaa qarka u saaran inay dhameystirto heshiiska ay kula soo saxiixaneyso xiddiga Liverpool Philippe Coutinho isla markaana uu ku imaanayo Camp Nou, sida laga soo xigtay Sport. Warar soo baxaya ayaa sheegaya in heshiis 12 milyan euro ...